FAHAFAHANA DESIGN: Avotsory amin'ny fahalalahana saika tsy voafetra ny hevitrao sy ny fahaizanao. Amin'ny famolavolana, ny vy dia manome ny sakany azo atao lehibe indrindra miaraka amin'ny sanda ara-tsaina mety.
TRANSPARENCY: Ny mombamomba ny vy somary manify miaraka amin'ny sakan'ny haavon'ny toerana ambany indrindra dia mamela ny mangarahara, mamorona toerana onenan'ny tondra-drano maivana ary manome mari-pana amin'ny efitrano ahazoana aina.
VERSATILITE: Ny fahaizan'ny vy tsy manam-petra dia midika fa azo ampiasaina amin'ny maritrano nentin-drazana sy ankehitriny - any ivelany na ao anaty trano.
DESIGN: Ny fisehoan'ny vy mahaliana amin'ny maha-fitaovana azy dia ahafahana mamorona elanelam-potoana manomboka amin'ny fomba kanto sy kilasika ka hatrany amin'ireo maoderina sy lamaody.
TRANSPARENCY: Ny tantaram-by vy somary mahia miaraka amin'ny sakan'ny haavon'ny toerana ambany indrindra dia mamela ny mangarahara, mamorona toerana onenan-drano tondra-drano raha manome mari-pana amin'ny efitrano ahazoana aina.